Ny mpanao sary ho an'ny ankizy: olona iray manan-danja amin'ny fanabeazana ny faralahy | Famoronana an-tserasera
«Fiaraha-miasa fandokoana» avy amin'i artnoose dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Tadidinao ve ireo sary nananan'ny bokinao fony ianao mbola kely? Inona no lanjan'izy ireo taminao?
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasongadinay ny maha-zava-dehibe ny endrik'ilay sary an-tsary an'ny ankizy, ankoatry ny mahita hoe inona ireo toetra tsy maintsy ananana raha te ho iray amin'izy ireo ianao.
1 Ny maha-zava-dehibe ny sary amin'ny fahazazana
2 Mampiavaka ny fanoharana nataon'ny ankizy
3 Aiza no hisamborana ny fanoharana ataon'ny zanakao
Ny maha-zava-dehibe ny sary amin'ny fahazazana
Ny zandriny indrindra dia manomboka ny fivoarany ara-pahalalana amin'ny alàlan'ny fanekena aloha ny sary roa-habe izay ampiasain'izy ireo sy ampifandraisiny amin'ny anarana iray. Ary tsy io ihany no mahatonga ny tarehin-tsary ho an'ny ankizy mpanazava amin'ny fahazazany. Ary koa mamela ny fampandrosoana ny fisainana, manampy ny zaza hahatakatra ny tontolo manodidina azy, manatsara ny fisainany sy ny fahaizany mamorona ary mahatonga azy hahafantatra ireo toe-javatra sarotra sy olana amin'ny fomba tena tsotra. Ho fanampin'izay, mamela anao hamerina ny sary hitanao manodidina anao ho toy ny sary, manamboatra foto-kevitra.
Noho io antony io dia zava-dehibe ny fananana ny asan'ny fanoharana manana andian-toetra mampiavaka azy sy mahavariana ho an'ny zaza.
Mampiavaka ny fanoharana nataon'ny ankizy
Ny "Abc" nataon'i scheihing dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Ny loko dia singa iray lehibe amin'ny fanoharana nataon'ny ankizy. Ny boky miloko dia misarika ny sain'ny zaza amin'ny fomba mahery vaika ary manasa azy hijery tsara ilay tantara.
Tsara homarihina ihany koa ny fitantarana ny tantara, izay mety misy lahatsoratra na sary tsotra izay mitantara izay miseho samirery. Ny tantaran'ny ankizy dia matetika miresaka momba ny lohahevitra mahazatra ny ankizy, toy ny fifandraisana amin'ny sakaizany, mamela ny pacifier ao aoriana, ny traikefa amin'ny diapers ary maro hafa. Ao amin'izy ireo dia miharihary ny olana sy ny fiatrehana ny tarehin-tsoratra, toy ny lohahevitry ny fahafatesana, ka manome fampianarana tsotra sy an-tsary izay hataon'izy ireo anaty, hanampiana azy ireo amin'ny ho avy.
Ny teknika ampiasaina dia mitovy, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny sary azon'izy ireo natao, mahatonga azy io ho mahazatra kokoa sy handinika bebe kokoa, izay tsy dia misy loatra raha toa ka tena zava-misy ireo sary. Ny fampiasana gouache sy watercolor no tena fahita, ankoatry ny fanomezana loko mahery anay.
Rehefa mandeha ny lenta fanabeazana dia mitombo ny habetsaky ny lahatsoratra manohana ny fanoharana, saingy mijanona ho misy lanjany lehibe ireo sary.
Karazan-tsary iray hafa an'ny ankizy dia ireo izay mampiasa teknikan'ny collage, mampifangaro azy ireo amin'ny sary hafa izay nolokoin'izy ireo na noforoniny nomerika, ka nahatonga ny vokatra tena izy tany am-boalohany feno famoronana.
Noho izany, ho tonga an'ity karazana mpanao sary ity, zava-dehibe ny fahalalana psikolojia zaza ary ny fampiroboroboana sary amin'ny fomba an'ohatra, toy ny fanaon'ny ankizy. Mpampiasa sary maro no mampiasa isan'andro bokikely na boky fanaovana sary, izay azon'izy ireo izay rehetra manodidina azy ireo toa ny zaza.
Imbetsaka isika no zatra manao tena lafatra sy manao asa tena misy. Amin'ity tranga ity dia tokony hanao ny lalana mifamadika isika, avelao ny tanana hisintona izay rehetra tadiavintsika malalaka, toy ny ataon'ny ankizy kely. Raharaha fanao io.
"Moleskine 14" avy amin'i serafini dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC 2.0
Aiza no hisamborana ny fanoharana ataon'ny zanakao
Ny mpanao sary an'ny ankizy dia tsy manao boky sary fotsiny. Inona koa be fangatahana amin'ny sehatra hafa toy ny ohatra amin'ny kilalao, famolavolana lamba, famolavolana ny vokatra alatety sy ny maro sns. Eo amin'ny sehatry ny varotra dia ilaina ihany koa ny misarika ny sain'ny zaza amin'ny alàlan'ny sary manaitra.
Amin'ny ankapobeny, ny marika dia mazàna mifanerasera amin'ny mpanao sary izay manana endrika mampiavaka azy na voafaritra tsara, na dia maro amin'izy ireo aza no maniry ny mpanakanto marolafy, afaka mampifanaraka ny fomba samihafa arakaraka ny vokatra. Na manana ny fombanao ianao na tsia, ny zava-dehibe dia zavatra arak'asa izy io Ary tianao ny zavatra ataonao, mieritreritra ny hamorona sangan'asa tsara kokoa noho ny valiny farany, satria amin'izay dia hankafizinao ny dia.
Inona no andrasanao hanokatra ny pad sketch anao ary hanomboka handoko amin'ny ora rehetra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny mpanao sary ho an'ny ankizy: olona iray manan-danja amin'ny fanabeazana ny faralahy